Vidio ny Moto X Play amin'ny vidiny tsara indrindra. Androidsis
Azo atao izao ny mividy Moto X Play amin'ny vidiny tsy azo resena, farafaharatsiny ny fotsy!
Iray amin'ireo terminal izay nanome be indrindra horesahina nanomboka teo ny fanolorana ofisialy farany an'ny Motorola, tsy isalasalana fa ny vaovao Moto X Play, toy izany Smartphone Android manaitra miaraka amin'ny famaritana teknika sy ny fiasan'ny Android avo lenta amin'ny a Vidiny antonony Android.
Ny vaovao mahaliana antsika anio dia ny manambara izany manomboka anio Azo atao izao ny mividy ny Moto X Play amin'ny vidiny tsy azo resena avy amin'ny pejy mihitsy Tranonkala Motorola ary Amazon Spain.
Hoy aho, nanomboka androany Azo atao izao ny mividy ny Moto X Play amin'ny vidiny tsy azo resena, farafaharatsiny rehefa miresaka momba ny maodely 16 Gb amin'ny fitehirizana anatiny sy amin'ny fotsy isika satria azontsika ampiasaina mivantana any Amazon Spain amin'ny vidiny 347 euro miaraka amin'ny sarany fandefasana maimaim-poana.
Ny zavatra tsy mampino momba an'io dia raha mifidy ilay kinova miaraka amin'ny fitehirizana anaty 16 Gb ihany koa isika fa amin'ny mainty, ity dia mandeha amintsika amin'ny vidiny 384,90 euros, izay mitondra antsika mankany vidiny ambony efa ho 40 Euros amin'ny alàlan'ny terminal misy famaritana teknika mitovy amin'ny fanovana tokana ny lokon'ny vatana sy ny fonony aoriana.
Izaho manokana dia misafidy ilay kinova ao anatiny fotsy misy rakotra lamosina fotsy fotsyAmin'ny ankapobeny, satria tiako kokoa ny maodely fotsy satria hitako amin'ny endrika maoderina sy mahafinaritra kokoa noho ny maodely mainty izy ireo, na dia amin'ity tranga ity aza dia aleoko mifidy an'ity kinova fotsy ity noho ny famonjena ny 40 Euros izay The Ny terminal amin'ny mainty dia mitaky vola tsy takatry ny saina amintsika bebe kokoa.
Ny toetra tsara lehibe tokony homarihina amin'ity Motorola Moto X Play vaovao ity, ankoatry ny azy 5.5, efijery FullHD, ny fanoherana ny rano amin'ny alàlan'ny fanamarinana IPX67 sy ny maha-tsara azy Bateria 3630 mAh miaraka amin'ny asan'ny TurboPower15 afaka, ao anatin'ny 15 minitra fotsiny ny famerenam-bola, manome antsika fizakan-tena 10 ora. Tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo toetra tsara manasongadina dia ny azy fakan-tsary faran'izay tsara tsy misy intsony ary tsy latsaky ny vahaolana 21 mpx mahay maka sary avo lenta na dia amin'ny hazavana ambany aza.
Tsy isalasalana fa terminal tokony ho raisina, farafaharatsiny ny maodely fotsy noho izy io Famaritana teknika tsy mampino amin'ny vidiny tsy azo resena.
Mba hamaranana ity vaovao momba ny fisian'ny Moto X Play vaovao ity dia tiako ny mamela ny tenako hanana fahazoan-dàlana handefa fanontaniana amin'ny olona iray tompon'andraikitra amin'ny Motorola izay afaka mamaly ny olana ateraky ny: Fa maninona ny Moto X Play amin'ny mainty no mitentina 40 Euros bebe kokoa?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Azo atao izao ny mividy Moto X Play amin'ny vidiny tsy azo resena, farafaharatsiny ny fotsy!
Izy io dia mahatsiravina ny loko fotsy, noho izany ny vidiny.
Inona no mahatsiravina raha endrika roa mitovy sy mitovy izy ireo? Ny loko tokana no miova. Mihevitra ve ianao fa ampy ny fanamarinana hampiakarana ny vidiny amin'ny 40 euro?
Ahoana no ahafahan'ny maodely mainty miaraka amina famaritana teknika mitovy lafo kokoa? https://www.androidsis.com/ya-es-posible-comprar-el-moto-x-play-a-un-precio-imbatible/ #MotoXPlay Motorola
Angamba izy ireo dia satria mivarotra singa fotsy vitsy kokoa, na mainty na loko mainty hafa, izany no mahatonga ny fotsy ho maloto hatrany ... Tsy haiko, hoy aho, na dia mbola tsy nanana finday fotsy aza aho, tsara tarehy ry zareo mitovy ary amin'ny € 40 latsaka Toa tsara tarehy kokoa aza hahaha: p
Izy io dia mety vokatry ny tahiry fotsiny, ny amazon dia miasa toy izao, ny tahiry bebe kokoa, ny vidiny ambany, izany hoe ... Ny tranga, mieritreritra ve ianao fa terminal tsara amin'izany vidiny izany? Satria 400 euro dia tsy mora. Ok, fantatro fa misy finday 700, 800, 900 euro, fa 400 kosa tsy manome anao, raha jerena fa isaky ny misy ambany, antonony ambany, antonony na izay tiantsika hiantsoana azy latsaky ny 200 euro dia mila finday izay miasa tsara ho antsika isan'andro isika. Ahoana ny hevitrao?
GIGASET ME, famaritana sy vidin'ny tsipika smartphone vaovao an'ny orinasa alemanina